Pachís 🎲 Pinda, nakidzwa uye tamba kubva kuEmulator.online
Parcheesi. Anodiwa nezvizvarwa zvevanhu kutenderera pasirese, chifukidzo mutambo webhodhi unofadza uye unovaraidza mune zviri nyore. Ngatione Nhoroondo uye kuda kuziva kweParcheesi.
Parcheesi: maitiro ekutamba nhanho nhanho 🙂
Chii chinonzi Parcheesi? 🎲
Mutambo weParcheesi mutambo webhodhi usingade kuiswa. mabvazuva mutambo wechinyakare Iyo inogara iri sarudzo hombe kuunza vana nevakuru pamwechete pamba kana munzvimbo yekunze.
Iwo mataira haakwanise kudzokera kumashure, ivo vanongogona kufambira mberi munzira inopesana newachi, uye kuti upinde kuimba yekupedzisira iwe unofanirwa kukwenya nhamba chaiyo inodikanwa.
Kana iyo nhamba inobuda iri yakakura kupfuura inodikanwa uye iyo pawn inofambisa iyo yekupinda kune yekupedzisira mraba, uchafanirwa kutendeutsa bhodhi imwezve nguva.
Vatambi vari vanochinjana kupeta madhiri.
Kuti abvise kadhi kubva kumba kwake kana kutanga bhokisi, anotora chikamu ndinofanira kuwana nhamba 5 (mune dzimwe nzvimbo nhamba 6). Kusvikira panguva iyoyo, iwe unofanirwa kugara munzvimbo iyoyo uye kuramba uchipfuudza yako nguva.
Yechitanhatu ndiyo Chitsvene Grail yeParcheesi, sezvazviri inobvumira chidimbu kufambisira mberi mativi matanhatu uye kumonera iwo dhayeti zvakare.
Kana iwe uchikunguruka pamwe nemadhizai vatatu 6 mumutsara, yekupedzisira pawn yekufamba ichave kurangwa nekudzokera kunzvimbo yekutanga, iyo nzvimbo iyo pawns iri pakutanga kwemutambo.
MuParcheesi, hapana anodarika maviri zvidimbu anotenderwa kutora nzvimbo imwechete pabhodhi.
Muchiitiko chekuti paine zvidimbu zviviri mudivi rimwe chete, "shongwe" kana "chipingamupinyi" chinoumbwa icho inovhara nzira yekuyambuka yemamwe mavara.
Chipingamupinyi chinogona kubviswa chete nemugadziri wayo. Kana mutambi uyu akakungurutsa matanhatu parufu, anomanikidzwa kuputsa chimiro chake, achifambisa imwe yehwanyanza pashongwe.
Kana mumwe munhu akakungurutsa dhiza uye opedzisira amhara munzvimbo imwechete kune shamwari yatove, iyi shamwari inosuruvarisa ichafanira kudzokera pakutanga. Sangano iri rinonzi "idya anopikisa".
Nhoroondo yeParcheesi 🤓
Nhoroondo inoti mutambo uyo waizopa Parcheesi wakaberekerwa muIndia kare kare, pakati pezana remakore rechitanhatu.
Kudanwa Pachisi , yaimboridzwa kune vane mukurumbira Ajanta mapako , iri mudunhu re Maharashtra.
Mumiriri wayo wekutanga unoonekwa pasi uye madziro emapako, ayo ari inoshandiswa sebhodhi.
Chido ndechekuti chaizvo nekuda kwehupfumi hwezvivezwa zvaro uye mapako emifananidzo akanyorwa kubva Muzana ramakore rechipiri BCNhasi, ichi chivakwa chekuvaka chakaumbwa nemapako makumi matatu nemaviri ndeye UNESCO World Heritage Saiti. A inofanira kuona nzvimbo yevashanyi kune chero munhu anoshanyira India.
Kumwe kuda kuziva, kwainge kwakanyorwa mune zvekare nyaya, yaive nzira iyo yakanyanya "kupindirana" kupfuura mambo weIndia Jalaluddin Muhammad Akbar akagadzira kutamba Pachisi. Chaizvoizvo yakagadzira mhenyu vhezheni yemutambo, achitsiva zvidimbu zviri pabhodhi nevakadzi vanobva kumhuri yake.
Parcheesi nemazita ayo akasiyana
Sezvo zvese zvakanaka zvinopedzisira zvave kuteedzerwa, pakupera kwezana ramakore rechiXNUMX, neBritish colonization, Pachisi yakatora nhanho dzayo dzekutanga kunze kwenyika.
Hazvina kutora nguva refu vatongi veBritain Empire vaunza mutambo uyu kuUnited Kingdom, uko, mushure mekumwe kugadziridzwa, yakatumidzwa zita zviri pamutemo kuti Ludo (chiLatin che "mutambo") uye nekudaro yakapihwa pateni muna 1896.
Chinozivikanwa kubva ipapo kuenda mberi ndechekuti mutambo "wakaenda" uye, mukati merwendo, Ludo uye akasiyana ayo akawana mukurumbira mukuru munyika zhinji dzepasi, pasi pemazita akasiyana siyana.
MuGerman, semuenzaniso, Ludo inonzi "Mensch ärgere dich nicht", Zvinoreva chimwe chinhu senge"Shamwari usapenga", Uye ine mazita akaenzana muchiDutch, Serbo-Croatia, Bulgarian, Czech, Slovak nePolish, uko kuri kuzivikanwa zviri nani chinese ("The Chine (e) e").
MuSweden, inozivikanwa se "négyszáz", Zita rakabva pazwi rechiLatin fiat, zvinoreva kuti"ngazvive zvakadaro".
Misiyano yakajairika muzita iri "Fia-spel"(Fia mutambo) uye"Fia med knuff”(Fia nekusunda). MuDenmark neNorway, oddly zvakakwana, zita rekuti Ludo rakachengetwa.
MuNorth America, inonzi seSpain, Parcheesi. Asi pane zvakare mutsauko unogadzirwa nemhando dzakasiyana, dzinozivikanwa se Ndine hurombo! uye Dambudziko.
Uye kuSpain, isu tese tinozviziva seParcheesi.
Zvido zveParcheesi 🎲
Kutenda kumitemo yakapusa iri nyore kurangarira, mutambo weParcheesi wakakodzera mazera ese, kuti vana vanogona kutamba pamwe chete kana nevamwe vese vemhuri. Chakajairika ndechekuti vatambi vaviri kusvika vana vanotamba, asi isu tinowanawo mhando dzinotamba vatambi vaviri kana kupfuura. Mune ino kesi, iwo mavara anowedzerwa kune yatove echinyakare tsvuku, bhuruu, yero uye girini.
Kune avo vakakwanisa kupfuura kusava nehanya nechishamiso ichi uye vasingazive chaizvo kuti chii icho chiri, iyo Parcheesi mutambo webhodhi unogona kutambwa nevatambi vaviri, vatatu kana vana (mune iyi nyaya inogona kuumba vaviri vaviri).
Iyo Parcheesi bhodhi yakaenzana uye yakatarwa nemuchinjikwa, neruoko rumwe nerumwe rwemuchinjikwa rumwe ruvara (kazhinji tsvuku, yero, girini uye bhuruu).
Mutambi wega wega anofanira kugadzira zvidimbu zvake zvina, zvinonzi "pawns"Kana kuti"mabhiza", Pedzisa kutenderera pabhodhi uye usvike nzvimbo yekupedzisira pamberi pevamwe.
Sezvo? Kutamba madhiri! Ndizvozvo, Parcheesi mutambo werombo rakanaka, asi hapana zvinonakidza.
Mitambo miviri yakajairika
Iwe watoona kare kuti kutendeuka bhodhi mumutambo uyu kunosanganisira iyo Mutambo weGoose. Zvakare kubva mativi maviri, asi neyakasiyana dhizaini yedu yedu Parchis y Gloria Game. Kufuridzirwa nengano dzekare senge "Svosve neMhashu"Kana kuti"Makava uye Gunguwo”Inobvumira vana vanopfuura makore matatu ekuberekwa kuti vatandare nemitambo miviri. Zvidimbu zvaro zvakaumbwa sebhiza.